Uwe ejiji nke mpaghara Andean | Akụkọ njem
Mariela Carril | 31/08/2021 17:00 | Colombia, omenala
Gụọ "Mpaghara Andean" anyị na -echekwa maka South America na ọtụtụ mba, mana n'eziokwu, akọwapụtara, ọ na -ezo aka otu n'ime mpaghara eke isii mejupụtara Colombia. O doro anya na a na -akpọ ya ugwu Andes.
Bụ na etiti Colombia ma nwee ngalaba atọ nke Andes, Central Cordillera, Western na Eastern. O doro anya na o nwere mbara ala jupụtara na ndagwurugwu, elu ugwu na ọwa mmiri na ọ bụ mpaghara mara mma nke ukwuu na mba ahụ. Ndị mmadụ nọ ebe a nwere omenala ha na iji ejiji n'ụzọ ụfọdụ bụ otu n'ime ha. Mgbe ahụ, Kedu uwe ejiji nke mpaghara Andean?
2 Uwe ejiji nke mpaghara Andean
Dịka anyị kwuru, ọ bụ otu n'ime mpaghara eke Colombia. Nwere ọtụtụ ugwu na ọtụtụ ụdịdị dị iche iches na kwa, ọ bụ a ebe ndị mmadụ juputara na ya na nnukwu ọrụ akụ na ụba. Nke a bụ Massif mgbawa, Santa Rosa de Osos Plateau, Ndagwurugwu Osimiri Cauca, nke a na-akpọ Nudo de los Pastos, Serranía de Perijá na Nevado de Tolima, naanị ịkpọ aha ole na ole n'ime mpaghara ya.
Na mpaghara Andean akụkụ buru ibu nke akụrụngwa mmiri Colombia dị na nnukwu mpaghara ọrụ ugbo, gụnyere Axis kọfị. Ọ bụkwa ala ndị ama ama emeralds nke colombian yana mpaghara ebe Bogotá, Medellín na Calí dị.
Uwe ejiji nke mpaghara Andean
Dị ka anyị kwuru na ụdị edemede ndị a, ọ dịghị otu ejiji ọdịnala mana ọtụtụ. Na ihe niile, n'ezie, metụtara omenala obodo na akụkọ ifo. Mpaghara Andean dị iche iche dịka enwere nnukwu syncretism omenala: ka omenala obodo agbakwunyere kemgbe oge ọchịchị Omenala Africa na Spanish. Ọ bụrụ na anyị agbakwunyere na ọnọdụ ihu igwe na ọdịdị ala dị iche iche, ihe ga -esi na ya pụta bụ ite na -agbaze omenala dị ebube.
Ekike ndị a na -ahụkarị dị iche iche, enwere ndị ochie, enwere ndị ọhụrụ na ndị na -apụta naanị n'ememe omenala ma ọ bụ ndị metụtara otu oge akụkọ ihe mere eme na ọ nweghị ihe ọzọ. Yabụ, anyị nwere ike ịkpọ ụfọdụ ndị ama ama.
Ka anyị malite na ụdị ejiji Antioquia. Ha bụ uwe dị mfe, nke ndị na -arụ ọrụ. Nwoke ahụ na -eyi uwe dị ka onye nkịtị na -eme mkpọtụ, na -afụkọta ogologo ọkpa denim, uwe elu na aka uwe kwakwara.
N'isi ha, ha na -eyi okpu nwere eriri ojii, dị ka Antioquia, jiri mma, obere poncho na a. karọlil (akpa akpụkpọ anụ. Maka akụkụ nke ha, ụmụ nwanyị, na -ahụkarị ndị na -ese kọfị a maara dị ka chapolerasHa nwere uwe elu nwanyị na -acha ọcha nwere aka uwe sara mbara na olu dị elu, uwe mwụda n'elu uwe mwụda nke nwere ifuru akwụkwọ na lace, yana ịchafụ dabara. Ha na -eyikwa nnukwu okpu, espadrilles na nkata n'aka.
El ụdị ejiji Boyaca Ọ na -ekpo ọkụ n'ihi na oyi na -atụ ebe a. Nwoke ahụ na -eyi uwe ogologo ọkpa, akwa ajị ajị ajị ajị ajị ajị, okpu akwa na akwa ọcha nwere ihe mkpuchi aka. Ọ bụrụ na ọ ga -agba egwu ahụ guabina, ịgba egwu ndị mmadụ, a na -afụcha uwe ogologo ọkpa, espadrilles na okpu jipa. Na nwanyị ahụ? Ọ na-eyi uwe mwụda ojii dị arọ nke nwere rịbọn nke agba dị iche iche, uwe ọcha na-acha ọcha, uwe ojii nwere otu nwere ihe mkpuchi, mantilla ojii na okpu jipa, n'etiti ụdị ndị ọzọ.
Tolima nwere uwe mara mma ma mara mma: n'ime ụmụ nwanyị, uwe mwụda ahụ nwere agba, nwere eriri silk na akwa na -acha ọcha nwere akwa lace. Ha na -eyi uwe elu nwanyị na -acha ọcha nwere akwa, aka uwe · / 4 na olu dị elu, yana akwa na n'elu sket n'onwe ya. N'elu ụkwụ, espadrilles, dị ka ụmụ nwoke. Ha na -eyi uwe ogologo ọkpa na uwe elu na ịchafụ uhie n'olu ha. Akpa azu, nke ejiri eriri eke eme, adịghị ụkọ.
Tolima na Huila bụ ngalaba abụọ na agbanyeghị na anyị na -ekwu maka ejiji Tolima, enwerekwa Ekike Huila, ụdị ejiji opita. A na -eji ya agba egwu sanjuanero, ịgba egwu nke mmemme Reinado Nacional del Bambuco na Neiva. Ụmụ nwanyị ahụ mara mma nke ukwuu, nwere akwa satin sara mbara nke nwere ruffles atọ na ifuru, okpokoro na sequins gbakwunyere akwa mkpuchi, yana uwe elu na -acha ọcha nwere ihe ịchọ mma ndị ọzọ. Na isi, nnukwu ifuru. Nwoke ahụ sitere na Huila nwere uwe ogologo ọkpa, eriri akpụkpọ anụ, espadrilles na okpu nwere uwe elu ọcha nwere akwa n'ihu na sequins. Ịchafụ uhie na -emecha ekike.
Santander nwekwara ụdị ejiji ya. Ụmụ nwanyị ahụ na -eyi uwe mwụda ojii gbara agba nke ukwuu, nwere mpe mpe akwa mara mma dị ka ihe ịchọ mma na nsọtụ ya, uwe elu nwanyị na -acha ọcha nwekwara eriri, espadrilles na okpu jipa. Nwoke ahụ na-eyi traụza ojii akpọchiri akpọchi, mana a na-afụkọta otu ụkwụ karịa nke ọzọ, uwe elu na-acha ọcha nke nwere akwa a kpara akpa na okpu nwere ọmarịcha ube.
Na Nariño, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị na -egosi nwa ha n'ikuku. Nwanyị ahụ nwere uwe elu nwanyị na -acha ọcha nke nwere ogologo aka uwe na uwe mwụda ojii nke dị n'okpuru, nwere uwe na -acha uhie uhie. Ha nwekwara akwa mkpuchi akwa silk, obere velvet ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ajị anụ, na okpu akwa. Iji dabaa na ya, nwoke ahụ nwere uwe ogologo ọkpa, uwe elu na -acha ọcha, na mbibi a kpara akpa n'ubu ya.
A na -ejikwa uwe dị mkpụmkpụ na Cauca. Uwe ejiji Cauca na -abụkarị ụmụ amaala na e nwere ọtụtụ n'ihi na ebe a enwere ọtụtụ agbụrụ. Mana, dịka ọmụmaatụ, enwere uwe ndị Guambianos: ụmụ nwoke ahụ nwere uwe mwụda na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ, uwe elu, ịchafụ nwere agba, okpu nwere mmetụta, akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, eriri na ruanas abụọ, otu ojii na isi awọ ọzọ .. Uwe mwụda nwanyị ahụ kwụ ọtọ na nke ojii, nwere eriri silk dabara na agba nke shawl. Uwe elu ahụ na -acha ọbara ọbara ma ọ bụ na -acha anụnụ anụnụ ma ha na -eyi okpu bowler nwere mmetụta na olu olu ọcha.
Ruo ụfọdụ n'ime ụdị ejiji kachasị mma nke Mpaghara Andean, mpaghara nwere ọtụtụ ngalaba: ihe niile akpọrọ Axis kọfị (Quindío, Risaralda, Caldas na Antioquia), Huila, Nariño, Cundinamarca, Tolima, Santander, Boyacá na Norte de Santander.
Ọ bụ ala nke ọtụtụ ememme na -ewu ewu na ọ bụ n'oge mmemme ndị a ka ekike niile mara mma, mara mma na agba mara mma pụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Colombia » Ekike a na -ahụkarị nke mpaghara Andean